Abavelisi bePendenti yokuSebenza kunye nabaXhobisi - iTshayina yeePendenti eziPrintayo
I-TS-D-100 ibhekisa kwitrasi yombane yegesi yombane.
Ukuphakanyiswa kwekhendi kuqhutywa ngumbane, okhawulezayo, okhuselekileyo kunye nonokuthenjwa.
Ngamagumbi ajikelezayo aphindwe kabini, uluhlu lokuhamba lukhulu. Iya kuba nokufikelela okungcono kwisigulana.
Ubude bengalo ejikelezayo kunye neendawo zegesi, iziseko zombane zilungelelaniswa ziyafumaneka.
Yongeza igesi yokukhupha kunye ne-nitrogen oxide interface, enokuhlaziywa kwi-anesthesia yonyango.
I-TS-DQ-100 ephindwe kabini ingalo yombane ye-Endoscopic Pendant evela kwiFektri
I-TS-DQ-100 ibhekisa kwipendekthi yombane ye-endoscopic pendant. Sisixhobo esibalulekileyo kutyando lweLaparoscopic. Iqhutywa ngumbane, ilunge kakhulu kwaye iyakhawuleza. Ayikwazi kuphela ukuhambisa umbane kunye negesi, kodwa ikwabeka nezixhobo zonyango. I-100% yenza ngokwezifiso ngokobungakanani, iindawo zegesi zonyango kunye neziseko zombane. Uyilo lweemodyuli, lunokuhlaziywa kwixa elizayo.
I-TS-Q-100 Ingalo ephindiweyo yoNyango lwe-Endoscopic Pendant
I-TS-Q-100, ibhekisa kwisingxobo sesibini sependant yonyango. Sesinye sezixhobo zotyando ezibalulekileyo kutyando lwangoku lwe-laparoscopic. Akunakubekwa kuphela izixhobo zonyango, kodwa amandla kunye negesi zinokubonelelwa. Iingalo ezijikelezayo kabini, ubude bengalo bungenziwa ngokwezifiso kwaye banokujikeleza iidigri ezingama-350, ukubonelela ngendawo eninzi yokuhamba.
I-TS-100 isiXhobo soMatshini sokuSebenza esiPhindwe kabini eTshayina
I-TS-100, le modeli ibhekisa kwipendenti yokusebenza ngengalo ephindwe kabini.
Uyilo lweengalo ezimbini luyonyusa indawo yomsebenzi wependenti yonyango.
Ubude bengalo ejikelezayo bunokwenziwa ngokwezifiso.
Zombini iibhokisi zomzimba kunye nomzimba wengalo unokujikeleza ngaphakathi kwiidigri ezingama-350.
I-TD-Q-100 Yengalo enye yeNcwadi yoNyango ye-Endoscopic yesiBhedlele
I-TD-Q-100 ibhekisa kwisingxamo esisodwa sonyango esingapheliyo.
Ngobumbano obumbeneyo kunye neempawu zesithuba esincinci, yindawo efanelekileyo yokusebenzela yabongikazi kwizibhedlele ezincinci kunye neeyunithi zokunyamekela kakhulu ezinqunyelwe kummandla wewadi.
Inokubonelela ngokuhanjiswa kombane, ukuhanjiswa kwegesi kunye neenkonzo zokuhambisa idatha, kunye nendawo yezixhobo zonyango.
I-TD-100 ye-single-Arm yoNyango yoNyango oluPhezulu lweSibhedlele
I-TD-100, le modeli ibhekisa kwilungu elinye lengalo yoqhaqho.
Ukucwangciswa okusemgangathweni kweendawo zegesi yi-2x O2, 2x VAC, lx AIR.
I-TD-Q-100 Ingalo enye yoNyango yoMbane yoNyango lwe-Endoscopic ye-Operation Theatre
I-TD-DQ-100 ibhekisa kwingalo enye yombane yotyando. Esi siphenduli se-endoscopic sinokunyuka sisezantsi ngenkqubo eqhutywa ngumbane. Isetyenziswa ngokubanzi kwigumbi lotyando, kwigumbi lexakeka, kwi-ICU nakwigumbi lokubuyela kwimeko yesiqhelo. Isetyenziselwa ukubonelela ngokudluliselwa kombane, ukuhanjiswa kwegesi kunye neenkonzo zokuhambisa idatha, kunye nendawo yezixhobo zonyango.
I-TD-D-100 yeNdawo yokuSebenza ngeRandi yokuSebenza ngeSitifiketi se-CE
I-TD-D-100 ibhekisa kwingalo enye yombane ojikeleze irhasi.
Isetyenziswa ngokubanzi kwigumbi lokusebenza nakwi-ICU. Ukuphakanyiswa kwekhendi kuqhutywa yimoto, engasebenzi ngokukhawuleza kuphela kwaye isebenze, kodwa ikhuselekile kwaye ithembekile.
Yenzelwe zonke izinto eziyimfuneko zombane, idatha kunye neenkonzo zonyango zegesi.